Banaanbax ka dhacay Caasimadda Puntland | Keydmedia
Banaanbax ka dhacay Caasimadda Puntland
Dadkaan ayaa isagu soo baxay barxadda Gorowe, iyagoo doonayey inay dareenkooda ku muujiyaan sida ay dhibaato ugu qabaan sare u kaca sarifka dollar-ka iyo macaashidda dhanka nolosha.
GAROWE, Puntland - Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaas ay Ciidamada amniga Maamulka Puntland ku fureen boqolaal qof oo maanta dibadbax ka dhigayay bartamaha magaaladda Garowe.
Dadkan oo isagu soo baxay Barxadda Garowe, ayaa ka mudaharadaayay sare u kaca dollar-ka iyo maciishadaha noloshada, balse lama dhageysan cawashadooda oo waxaa loogu bedelay rasaas iyo in si xoog ah lagu kala eryo.
Shacabka Puntland ayaa sheegay in dhaqaalaha uu hoos u dhacayo, islamarkaana rajadii ay ka qabeen Madaxweyne Deni markii la doortay ay noqotay mid waxba ka hirgelin, waxaana sare u kasii kacay qiimaha lagu sarifo dollar-ka Mareykanka.
Halkii dollar ayaa lagu sarifayaa in ka badan 40,000 shilin Soomaali ah, iyadoo boqolkii dollar lagu sarifayo in ka badan afar milyan, taasoo ka dhigaysa qiimihii ugu sareeyay oo abid uu gaaro tan iyo markii lasoo dhisay maamulka hadda jira ee Deni uu hogaamiyo sanadkii tagey horaantiisa.
Qiimaha macaashidda, sida raashiinka iyo badeecooyinka kale ee nolosha muhiimka u ah ayaa qiimahooda cirka gaarey, oo dadka qaar awoodi waayeen inay iibsadaan, maadaama xili adag lagu jiro, oo wadanka uu ka jiro dhaqaale la'aan.
Ciidanka Maamulka Puntland ayaa dhowr jeer sameeyay gadood, iyagoo qabsadey xarumo dawladeed oo Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo ku yaalla, iyagoo kasoo baxay saldhigyadooda kadib markii ay mudo bilooyin ah waayeen mushaarkooda iyo xaquuqdii kale ay heli jireen.